မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုက်စကူးဆိုတာက ကြပ်မပြည့်တဲ့မိဘတွေရဲ့ ခလေးတွေကို ထားတာပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုက်စကူးဆိုတာက ကြပ်မပြည့်တဲ့မိဘတွေရဲ့ ခလေးတွေကို ထားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုက်စကူးဆိုတာက ကြပ်မပြည့်တဲ့မိဘတွေရဲ့ ခလေးတွေကို ထားတာပါ။
Posted by phone_kyaw on Feb 20, 2012 in Copy/Paste | 46 comments
ခလေးတွေ သုံးယောက်လုံးကို နိုင်ငံခြားမှာမွေးခဲ့ရတယ်။ နှစ်ယောက်က သြစတျေးလျမှာ မွေးတယ်။ အကြီးဆုံးတစ်ယောက်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ မဲ့ဆောက်မြို့ က ဆေးရုံကြီးမှာမွေးတယ်။ ကျောင်းထားရမဲ့အရွယ်ရောက်တော့ ကျောင်းအပ်တယ်ဆိုပါစို့ ။
ပထမဆုံး ခလေးကို မှုကြိုထားပါတယ်။ ဗမာလိုဆိုရင် သူငယ်တန်းလေးလို့ ခေါ်မလား။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ မှုကြိုကျောင်း။ ဘိုလိုပြောတဲ့ကျောင်း။ ဒီကျောင်းမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံ ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီကျောင်းလို့ ခေါ်တဲ့ အင်တာနေရှင်နယ် စကူးပေါ့။ ကဲ…သြစတျေးလျက အင်တာနေရှင်နယ် မှုကြိုကျောင်းမှာ သင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကလည်း မြန်မာပြည်က ကျောင်းတွေလို သင်တာမဟုတ်တာတော့ သေချာပြီ။ အကအခုန်၊ ပုံဆွဲ စတာတွေအပြင် ခလေးရဲ့ ဉာဏ်ရည်မြင့်လာအောင်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းပါတယ်။ ပထမတစ်ရက်နှစ်ရက်တော့ ခလေးကကျောင်းသွားရတာကို မကြိုက်ဘူး။ နောက်ပိုင်း ခလေးက ပျော်ယုံတင်မကဘူး ၊ ခဲ ပါခဲစေတယ်လို့ တောင် ပြောရမလိုပဲ။ ဒီကျောင်းက အစိုးရစရိတ်နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။
မှုကြိုအောင်တော့ သူငယ်တန်းတက်ရပြီ။ ကျောင်းချင်းချိတ်ပြီး လုပ်လိုက်တာ ကိုယ်တောင် မသိလုပ်ရဘူး။ ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာ ခလေးက သူငယ်တန်းတက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်ငယ်ငယ်တန်းကလို အမေက ကျောင်းကိုလိုက်ပို့ ပြီး ကျောင်းအပ်ခ၊ စာအုပ်ကြေး၊ မိဘဆရာအသင်းကြေး၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဘောဆေးဖို့ အတွက် အရက်ဖိုးတွေကိုပေးပြီးမှ ကျောင်းတက်လို့ ရတယ်။ အခု ကျနော့်သား မှုကြိုကော သူငယ်တန်းကော တက်တာ ဒေါ်လာ ငါးဆယ်ပဲ ကုန်တယ်။ တစ်နှစ်ကို ၂၅-ဒေါ်လာပဲ ကုန်တယ်။ ကဲ….ဘယ်လောက်ရှင်းလိုက်တဲ့ ကျောင်းတွေလဲ။
Private School လို့ ခေါ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းလည်းရှိတယ်။ သုံးလတစ်ခါကို ဒေါ်လာ နှစ်ရာလောက်တော့ပေးရတယ်။ ကျနော်တော့ မထားချင်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အစိုးရကျောင်းရှိရဲ့ သားနဲ့ငွေကုန်ခံပြီး ဒီကျောင်းကို ထားစရာလိုလို့ လား။ တချိူ့ တွေကတော့ ပြောတယ်။ အစိုးရကျောင်းက အသင်အပြညံ့တယ်။ စည်းကမ်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။ ဒါဆိုရင် လက်ရှိသြစတျေးလျအစိုးရဝန်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သူလည်း အစိုးရကျောင်းထွက်ပဲ။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပညာရှင်တွေလည်းတစ်ပုံကြီး။ သူတို့ လည်းအစိုးရကျောင်းဆင်းတွေပဲ။
မြန်မာပြည်က ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတွေ သူတို့ ခလေးတွေကို အင်တာနေရှင်နယ်စကူးထားတယ်။ ဈေးကလည်း သြစတျေးလျထက်တောင် အဆမတန်ကြီးသေးတယ်။ ဒီကျောင်းတွေဆီမှာ ခလေးတွေကို ထားမှ ခလေးရဲ့ ပညာရေးတိုးတက်တာမှမဟုတ်တာ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မြန်မာပြည်က အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုက်စကူးကနေ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး သြစီမှာ ကျောင်းလာတက်တယ်။ ကျနော်တက်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာ သူလာတက်တယ်။ သူက ငွေအများကြီးကုန်တဲ့ အင်တာနေရှင်နယ် စကူးကနေ ဆယ်တန်းအောင်တယ်။ ကျနော်က ငွေအနည်းအကျင်းလောက်ကုန်တဲ့ ပေါချောင်ကောင်းလို့ ခေါ်လို့ ရတဲ့ မင်္ဂလာဒုံက အောင်ဆန်းသူရိယလှသောင်းကျောင်းကနေ ဆယ်တန်းကို နှစ်ခါကျတယ်။ ကျနော်လည်းသြစီမှာ သူနဲ့ တန်းတူကျောင်းတက်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းတော့ ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ ငွေအများကြီးကုန်မှ ပညာတက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာတက်တာမဟုတ်ပါဘူး။
သြစီက မြန်မာတွေမှာ အယူအဆတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ ခလေးတွေကို ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ ပရိုက်ဗိတ်ကျောင်းမှာ ထားမှ ခလေးက ပိုလို့ အဆင့်မြင့်တယ်လို့ ပြောတယ်။ နေပါအုံး…ခင်ဗျားတို့ အလုပ်က ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်မို့ လို့ လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ စက်ရုံမှာလုပ်ကြတဲ့လူတွေ။ ဒါနဲ့ များငွေမပေးရတဲ့အစိုးကျောင်းမှာ မထားကြတာ အရမ်းအံ့သြတယ်။ အစိုးရကျောင်းနဲ့ ပရိုက်ဗိတ်စကူးတွေမှာသင်တဲ့ သင်ရိုးညွန်းတမ်းက အတူတူပဲ။ သင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းမကွာဘူး။ ဒါနဲ့ များ ရှုးကြလေတယ်။ မယောင်ရဆီလူ ကိုယ့် -ီး ကိုယ်မြွေမှတ်လို့ ထခုန်သလိုပဲ။
ကျနော်တော့ ငွေကုန်တဲ့ ပရိုက်ဗိတ်စကူးကို အထင်ကိုမကြီးဘူး။ သူတို့ ကျောင်းထားမှ ကျနော့်ခလေးပညာတက်တာမှမဟုတ်တာ။ အဓိက အရေးကြီးတာက မိဘပဲ။ လမ်းညွန်မှုကောင်းဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ။
မြန်မာပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ အားလုံးက ဈေးကြီးကြီးပေးရတဲ့ ပရိုတ်ဗိတ်ကျောင်းက ဆင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ တောကြိုအုံကြားက ဗွက်တွေအပေခံပြီး သင်ရတဲ့ ကျောင်းက ဆင်းလာတဲ့သူတွေများပါတယ်။ ဥပမာ ကုလသမဂ္ဂအထွေအထွေ အတွင်းရေးမှုးချူပ်လုပ်ဘူးတဲ့ ပန်တနော်သားဖြစ်တဲ့ တောသားကြီးဦးသန့် ကိုပဲ လေ့လာလေ့ကြည့်ပါ။ အခုခေတ်လို တစ်လကို ဒေါ်လာ သုံးရာပေးရတဲ့ အင်တာနေရှင်နယ်စကူးက လေးတန်းမအောင်ခဲ့ပေမဲ့ သူဘယ်လောက်တော်ကြောင်း သိပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ဗျာ….မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုက်စကူးဆိုတာက ကြပ်မပြည့်တဲ့မိဘတွေရဲ့ ခလေးတွေကို ထားတာပါ။
”ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မြန်မာပြည်က အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုက်စကူးကနေ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး သြစီမှာ ကျောင်းလာတက်တယ်။ ကျနော်တက်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာ သူလာတက်တယ်။ မင်္ဂလာဒုံက အောင်ဆန်းသူရိယလှသောင်းကျောင်းကနေ ဆယ်တန်းကို နှစ်ခါကျတယ်။ ကျနော်လည်းသြစီမှာ သူနဲ့ တန်းတူကျောင်းတက်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းတော့ ရှိပါတယ်။ ”
သူက ပိုက်ဆံချမ်းသာလို့၊ စာလိုက်နိုင်လို့၊ စာတော်လို့ကျောင်းလာတက်တာ။ ရှင်သာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ယူပြီး နိုင်ငံသားမခံယူခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှင်အဲဒီကျောင်းတက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်လား။ အဲကျောင်းတွေ ကနိုင်ငံသားနဲ့အပြင်ကျောင်းသားဈေး ၄ ဆလောက်ကွာတာ။ အပိုတွေသိပ်မပြောနဲ့။ သူများတွေကြပ်မပြည့်ဘူးဆိုတော့ရှင်ကတော့ကြပ်ပြည့် လွန်ပြီးကြောင် သွားတာထင်တယ်နော်။ လူတွေနဲ့စကားပြော လို့မရတဲ့ရောဂါရှိလား။
သိလည်းမသိပဲ နဲ့မမသဲနု။ လေ့လာပါ လိုက်စားပါဆိုရင် သတင်းစာဇောက်ထိုးဖတ်ပြီးကားမှောက်တယ်လို့ ပြောတဲ့ မြန်မာပြည်က ပညာမဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်သိုက်ထဲကလား
ဟဲ့မိုက်ရိုင်းပါလား။ နင်တယောက်ပဲတလောကလုံးမှာပညာတတ်လား။ လူတိုင်းကိုပညာမတတ်ဘူးပဲထင်နေတာ။ နင့်နားမှာနေတဲ့လူတွေအားလုံးပညာ မတတ်ချည်းပဲထင်တယ်။
….မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုက်စကူးဆိုတာက ကြပ်မပြည့်တဲ့မိဘတွေရဲ့ ခလေးတွေကို ထားတာပါ။ လို့ပြောရအောင်နင်ကဘာကောင်လဲ။
အစ်မသဲနုအေးရေ .. သူလည်း ပညာတော့တတ်ပါတယ် .. လူမုန်းခံရအောင် ပြောတတ်တဲ့ အပြောဆိုအရေးသားပညာလေ … ။ ပြောရလွန်းလို့လည်း .. မောနေပြီး .. ။
ပိုက်ဆံရှိလို့ ကိုယ့်ကလေးကိုယ် ကျောင်းထားတာတောင် ကြပ်မပြည့်ဘူးဖြစ်ရသေးတယ် … ။
စာသင်နေလျှင်တောင် ပင်ပန်းနေဦးမယ် … ….. ဒုက္ခသည် အမည်ခံပြီး … သြစီမှာ သွားနေလျှင်တော့… အသံကောင်းလည်း ဟစ်လို့ရပြီး …. အူစိုလောက်ပါရဲ့ … ငှဲငှဲ …
မြန်မာပြည်က ပညာမဲ့တဲ့ လူငယ်တသိုက်က ပညာသာမဲ့ရင်မဲ့မယ်။ခုလောက်အောက်တန်းကျတဲ့ပို့ စ်တွေ
ရေးနေတဲ့ စစ်ခွေးသူတောင်းစားလို ခွေးမြီးကောက်ကျီတောက်စွပ်လိုတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးဗျ။ပါတီနိုင်ငံရေး
လုပ်သလိုလိုနဲ့ နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်ယူထားသူတွေ ခင်များလိုကောင်ကြောင့်သိက္ခာကျတယ်။ဆယ်တန်းနှစ်ကြိမ်
ကျတာ မဟုတ်ဘူး၊ခင်များဥာဏ်ရည်က ဒီတသက်မြန်မာပြည်က ဆယ်တန်းမပြောနဲ့ သူငယ်တန်းတောင်မနည်း
ပြန်ဖြေရလောက်တယ်ဗျို့ ။ခင်များလို လူမျိုးကြောင့် လူ့ ဘောင်သစ်ပါတီ နာမည်ပျက်တယ်ဗျာ။သိပ်သတ္တိရှိတယ်
ဆိုရင် ခင်များနာမည်အမှန်တချက်ပြော ကျုပ်နဲ့ ရှင်းရဲပါသလား။
ငပိစားပြီး အော်ဇီမှာ ကြီးပွားနေပါသတဲ့ ကိုလေပွား ပညာတတ်ကြီးရေ
ခေါင်းစဉ်က ကြပ်ကို အဲသိလို ကြပ်ရမယ်လို့ဘယ်ပဒေါဖတ်ဆားက သင်ပေးလိုက်တာတုန်း
ကိုယ့်လူကတော့ တေဘီဆြာဘဲ ..
ရွာထဲက သာထိန်းဂျီးတွေ သာထိန်းမဂျီးဒွေ …
ကိုယ့်လူကို ၀ိုင်းမိဒုတ်ရှို့မှာ မြင်ယောင်သေးတော့တယ်…ခွိခွိ…
အင်း သဂျီးမင်း မလာခင် အရင် တရားလေးဘာလေး ဟောထားဦးမှ …
တနေ့ သေကြရမည် မသေခင် လုပ်ချင်တာလုပ်ကြ
အဲ့ …. ကိုယ်စိုက်တာ ကိုယ်ရိတ်ရမှာ ပဲဖြစ်သည်..။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို (၂)နှစ်ဆက်တိုက်ကျတဲ့ လူဟာဘယ်လောက်အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုလောက်တော့ဘူး။
ဆယ်တန်းကို အဲလောက်ဖြေနေရတဲ့ ဥာဏ်လေးနဲ့သြဇီမဟုတ်ပါဘူး၊မြန်မာပြည်ထဲက သူငယ်တန်းကနေပြန်တက်လာချီကွာ။
တော်တော်တော့ ခက်နေကြပြီ။ ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုသိကြမှာပါ။ သူ့အယူအဆနဲ့ သူဘာပဲရေးရေး (ရွာသူ၊ ရွာသားတွေကို မစော်ကားသရွေ့ပေါ့) ခင်ဗျားတို့ Comment ပေးရင်လည်း ဘောင်ထဲကနေရေးကြရင်ကောင်းမယ်။ အုပ်စုလိုက် လူတစ်ဖက်သားကို ၀ိုင်းစော်ကားကြတာတော့ မကောင်းဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒီရွာသူ ရွာသားတွေကို ကျွန်တော်က Positive View နဲ့လေးစားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ခင်ဗျားတို့က ကိုဖုန်းကျော် ရေးတဲ့ အကြောင်း အရာတိုင်းကို Negative View တွေနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်နေတာကတော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်။
အော် Oakar Bo ရယ်။ သူအမြဲစော်ကားနေတာမသိသေးဘူးထင်တယ်နော်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆယ်တန်း ၂ခါကျအဆင့် ပါဆိုမှ မြန်မာပြည်မှာနေလို့ကတော့ ဘယ်အဆင့်မှမှီမှာမဟုတ်ပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်အတန်းအောင်မှ အသက်ဘယ်နှစ်နှစ်အောက်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက် ဘောင်တွေလဲဝင်မှာမဟုတ်တော့ ဘယ်အဆင့်မှလဲရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့၊
သူများinternational school တက်ကြ ရတာကို အလကားနေရင်း မနာလိုနေတာပဲဖြစ်မှာပေါ့၊
အခုနေ သြဇီးမှာ နေရတဲ့အခြေအနေဟာ သားသမီးတွေရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့် နေခွင့်ရတာဖြစ်မှာပါ။
ကိုယ်အရည်အချင်း ကိုယ်သိရင် ကိုယ်ကြောင့် အဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဖူးဆိုတာသဘောပေါက်ပြီး သားသမီးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါ။
သြစတျေးလျက တက္ကသိုလ်က အရမ်းမိုက်တယ်။ ကားအကောင်းစားကြီးကိုစီး နောက်ဆုံးပေါ်လက်တော့ကိုကိုင် လက်ချာအခန်းထဲမှာ အဲယားကွန်းနဲ့ ဇိမ်ယူပြီး လိုက်မှတ်။ ညှော်နံ့ လည်းကင်းပ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လို ကြမ်းပိုးကိုက်ပြီး ဖင်မှာ အဖုတွေပေါက်လောက်အောင် ထိုင်စရာမလို။ နိုင်ငံတကာအကြောင်းတွေကို ဘိုလိုပြောတော့ အရမ်းကောင်းမှကောင်း။ သနားစရာကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည်က ဖင်မှာတောင် ဝဲ စွဲနိုင်တဲ့ လူငယ်လေးများကို ….အဟတ်..အဟတ်။ သူကြီးရေ…စိတ်တော့မရှိနဲ့ နော်။
အဲဒါနဲ့များအစောတုန်းက နင့်ကလေးတွေကိုမြန်မာပြည်မှာကျောင်းလာထားချင်တယ် ဆိုပြီးငါတို့ဆီကအကြံတွေတောင်တောင်းနေသေးတာလေ။ မေ့ပလား။
”သနားစရာကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည်က ဖင်မှာတောင် ဝဲ စွဲနိုင်တဲ့ လူငယ်လေးများကို”
ဆိုရင်ဘာလို့နင့်ကလေးတွေကျောင်းလာထားမယ်ပြောသေးလဲ။ နင်လေယဉ်ခ တတ်နိုင်ကြောင်းကြွားတာလား။ နင့်လစာလောက်ကတော့ဒီမှာလဲရတယ်။
သြစီက မိုက်တယ် ဗမာပြည်က ထွက်ပြေးတဲ့ ဒုက္ခသည်တောင်
” ကားအကောင်းစားကြီးကိုစီး နောက်ဆုံးပေါ်လက်တော့ကိုကိုင်
လက်ချာအခန်းထဲမှာ အဲယားကွန်းနဲ့ ဇိမ်ယူပြီး လိုက်မှတ်။ ”
ဆယ်တန်း၂ ခါဖြေရတာ ဘာစာမှမတတ်ခဲ့ဘူး။
ဟိုမှာ ဇိမ်ခံ စာသင်ခဲ့ရတော့ ဘာမှမတတ် တဲ့အပြင်
အပြောအဆိုမိုက်ရိုင်းပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကလူတွေကို စော်ကားလိုစော်ကား။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်း အကူညီကောင်းတွေ
မပေးဘဲ ပြည်တွင်းမှာ လုပ်နေတဲ့ သူတွေကို မတော်တရော်လျှောက်ပြောနေတာ
သစီက မိုက်တယ် ဗမာပြည်က ထွက်ပြေးတဲ့ ဒုက္ခသည်တောင်
ဒီတော့ဘာဘဲပြောပြော အောက်တန်းကျလွန်းပါတယ်။ ဒေါက်ခံဒယ်
သူကြီးရေ .ဒီပိုစ်လေး စတစ်လုပ်ပေးပါလား .. ရွာဆူဦးမှာမို့ အလွယ်တစ်ကူဖတ်လို့ရအောင် … :grin: :grin:
ဟုတ်ပါတယ် သူကြီး စတစ်လေးလုပ်ပေးပါ။ တော်တော်များများကိုဖတ်စေချင်လို့ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အမ၀မ်းကွဲကို ဖတ်စေချင်တာပါ။ ပရင့်ထုတ်ပြီး ဒင်းကို သွားပေးအုန်းမယ်။
စကားမစပ် သူကြီး၊ တီချယ်၊ အင်ဇာဂီ၊ ကိုသစ်၊ လေးပေါက်၊ ဒေါ်ဒေါ်ပဒုမ္မာ၊ မမဝေ၊ မမ၊ ကိုချောတို့ တုန်တုန်တို့လည်း မြန်မာအထက်တန်းကျောင်းထွက်တွေပဲ မဟုတ်လားဟင်။ ကျမလည်း မြန်မာကျောင်းထွက်စစ်စစ်တယောက်ပါပဲ။
ခုခေတ်ကတော့ သင့်၏ မသင့်၏ တကယ်ကောင်း၏ မကောင်း၏ ဆိုတာထက် ကိုရင်စည်စကားကို ငှားပြောရရင် ကလေးစိတ်နဲ့လူကြီးတွေ အများစုက ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်ကြတဲ့ ခေတ်မို့ထင်ပါတယ်။
အကြီးအကျယ် စိတ်ပူမိတာလေး တခုကမြန်မာစာအားနည်းတဲ့ မဖတ်ချင်တဲ့ ဘိုကျောင်းတတ်တဲ့ ကလေးတွေ မြန်မာ့သမိုင်း၊ မြန်မာ့ အရေးကို စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့တဲ့ အနော်မျှော်လူတန်းစား တရပ် ဖြစ်သွားမှာကိုပါ။
ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လို တွေးမိလဲဆိုတော့ ဘိုကျောင်းတတ်တဲ့ စာမလိုက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကို ကျမက စာသင်ဖူးလို့ပါ။ လိုက်နိုင်လား မလိုက်နိုင်လားမသိ စွတ်ရွတ်ထားတဲ့ မိဘတွေကို စိတ်ကုန်လို့ပါ။
ကျမစာလည်း အနီတွေဝေနေတော့မှာ မြင်ယောင်သေး ဟီး…
မပုခ်ျ မမှားပါဘူး။ လိုက်နိုင်လား မလိုက်နိုင်လားမသိ စွတ်ရွတ်ထားတဲ့ မိဘတွေကို လည်းမြင်ဖူးပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲအဲလိုကျောင်းတွေမှာဆရာမလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အတန်းထဲမှာ အသက်အတိုင်းအတန်းလိုချင်တဲ့မိဘတွေကြောင့်ကလေးစာမလိုက်နိုင် တာလဲတွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျောင်းမအပ်ခင် ကျောင်းသားသစ်ဆိုရင် placement test ဖြေရပါတယ်။ တချို့ကလေးတွေကအသက်နဲ့အတန်းကိုက်ညီပေမဲ့ တချို့ကတော့ မကိုက်ပါဘူး။ ဥပမာ ကလေးက ၁၀ နှစ်ပေါ့။ မြန်မာကျောင်းဆိုရင် ၄ တန်း၊ ၅ တန်းပေါ့။ ဒီမှာ placement test ဖြေလိုက်တော့ ကလေးက ၃ တန်း ( ဘိုကျောင်း ) မှာစတက်မှအ ဆင်ပြေမှာဆိုပေမဲ့တချို့မိဘကလက်ခံပေမဲ့တချို့မိဘတွေက ၄ တန်းကစထားပေးဖို့ဖိ အားပေးပါ တယ်။ ကျောင်းကလဲ မိဘ အလိုကျထားပေးလိုက်တယ်။ တကယ် ဒုက္ခ ရောက် တာက စာသင်တဲ့ဆရာမနဲ့ ကျောင်းသားပဲ။ ကိုယ့်ကလေးစာမလိုက်နိုင်တာသူတို့လော ဘကြောင့် ဆို တာမသိတဲ့မိဘတွေက complain တွေလာရော။ အဲတော့ကျောင်း ကဆရာမကိုထောင်းရော နဲ့သံသရာလည်နေတာပါ။ ဒါကလဲဘိုကျောင်းထားတဲ့ကလေး အကုန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ တန်းမှာအနဲဆုံး ၁ ယောက် ၂ ယောက်လောက်တော့ ပါတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်နွေရာသီဖွင့်တဲ့အတန်းတွေမှာတော့ တော်တော် များများပါတတ်ပါတယ်။ မပုခ်ျပြောတာမမှားပေမဲ့ကျွန်မဖြည့်စွက်ချင်တာကတော့မိဘ အကုန်မဟုတ်သလိုကျောင်းသားအားလုံးလဲမဟုတ်ပါဘူး။ ရှိပေမဲ့အနဲစုပါ။ အဲဒီအနဲစုကလဲကျူရှင်ကိုမြန်မာကျောင်းကကျောင်းသားတွေထက်ပိုယူပါတယ်။ တကယ်လိုက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကတော့ကျူရှင်လိုအုံးတော့ပုံမှန်ပဲယူလေ့ရှိပါတယ်။
အဲမှားသွားပြီ အနောက်မျှော်လူတန်းစားရေးတာကို အနော်မျှော်ဖြစ်သွားတယ် ဖြစ်ပုံများပြောပါတယ် ဟီး
မြန်မာပြည်က သူဌေးတွေ.. သတိထားဖတ်သင့်တဲ့.. အချက်အလက်တွေပါတယ်ဆိုတာ… အမှန်ပါပဲ…။
သူကြီးက သိပ်တရားမျှတတာပဲ..မိုးပြာဆိုလည်း လာထား..ဖုတ်ကျော်ဆိုလည်း လာထား
သူကြီးပြောသလို သူဌေးတွေ က သတိထားသင့်ပြီး၊အတုယူသင့်တဲ့ အချက်တွေပါတယ်ဆိုတာက မငြင်းပါဘူး။သူ့ 
ပို့ စ်တိုင်းမှာအနှောင့်မလွတ်တာတွေက အများသားဗျ။သူ့ လို ဆယ်တန်း (၂)နှစ်ကျပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်က သြဇီမကလို့ 
အာကသာထဲဘဲ သွားတက်ပါစေ၊ခွေးကို လရောင်ပြဟောင်ခိုင်းသလိုနေမှာပေါ့ဗျာ။
ချွန်ဒေါ့ ကွန်မန့်ကို ဘာအကြောင်းကြောင့်
ကိုဖုန်းကျော်ရဲ့ မဖြူစင်တဲ့ ငွေကို လက်ခံထားလိုက်ပီလား
သဂျီး ဝင်လာပီ မျှတ သွားတာပေါ့ ကောင်းပါလေ့ မောင်ဘုန်းကျော်က အရေးအသား
ကောင်းပါတယ် ကောင်းတာလေးရှိသလို ဆိုးတာလေးလဲ ရှိပေမပေါ့
သူမရှိရင်လဲ တခါတခါ ပျင်းစရာ
“.မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုက်စကူးဆိုတာက ကြပ်မပြည့်တဲ့မိဘတွေရဲ့ ခလေးတွေကို ထားတာပါ။” ဘုန်းကျော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ တော်တော်သဘောကျသွားပြီ… ငါလဲ ကလေးကို မူကြိုအဆင့်လောက်တော့ Private School ထားဖို့စဉ်းစားနေတာ… မိဘကျပ်မပြည့်ဖို့ထက် ကလေးတော်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေ…သြဇီအကြောင်းလေးသိရလို့ကျေးဇူးပါပဲ….နင့်လို သြဇီမှာမှမနေနိုင်ဘဲကွယ်….
ဒေါ်ပု ကိုတော့ ချီးကျူးတယ်ဗျို့…
စာရေးသူဘာပေးသလဲ ဒက်ကနဲဆွဲထုတ် နိုင်လို့…
ပီး ရဲရဲဝင်မန့်ရဲလို့ ….
ရထားစီးရင်း တခွိခွိရီလာတာ …..
အတော်ရီစရာကောင်းအောင် ရွာသူားများ ရေးတတ်ကြပါပေတယ်…ခွိခွိ
တကယ်တော့ ကြယ်ငါးကောက်ပစ်တဲ့အလုပ်ပါပဲ …
ဒါပေသိ ကိုယ့်ဆြာက ကြယ်ငါးကို ကောင်းကောင်းမပစ်ဘဲ ရေထဲ ပိတ် ကန်ချတာဆိုတော့
ဘေးက ကြည့်ရတာ မကောင်းဘူးပေါ့ …..
ဒေါ်ပုနဲ့ ကျုပ်အမြင်တူရဲ့ ….
ကျုပ်လည်း ဘိုကျောင်းသား ငတုံးလေးဒွေစာသင်ပေးဖူးရဲ့ …..
အံမယ် … တချို့ သူရို့နဲ့ပတ်သတ်ပီး သိရတဲ့ကလေးဒွေကျတော့
မေးရိုးကြမ်းပြင်ရိုက်အောင် တော်တဲ့ဟာလေးဒွေလည်း ရှိပါရဲ့
ဆိုတော့ကာ ကလေး နဲ့ ဘဲ ဆိုင်တယ်…ယူတဲ့ကလေး တတ်မယ်..
မယူရင်တော့ ကားမယ် ..တတ်ေ၇ာင်ကား ဖြစ်ပီးသကာလ. .ဗုံမဟုတ်ပတ်မဟုတ်နဲ့
နောက်ဆုံး မိဘပါ နားကားရော….
မိဘက တတ်လည်း တတ်နိုင် (ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်လည်းပါမှာပေါ့)
ငတုံးတွေ ကို ဘိုစာ အမြင့်တွေ လျောက်သင်ပေး …
ကိုယ့်သမီးက ဘယ်မှာ ထားတာလေ …လူကြားထဲကြွားလို့ကောင်းရုံ….
ငတုံးဒွေက အောင်ရုံက မတက်…
စိတ်ဒတ်ကလေးဒွေ ပျက်စီးသွားတာပဲ အဖတ်တင်တယ်…
သူကဘာကား စီးတာ ငါက ဘာကားစီးတာ…ဘာဝယ်ပေး ညာဝယ်ပေး…
ကြီးလဲလာရော ဗမာကျောင်းထွက်မဟုတ်လို့ ဗမာတက္ကသိုလ်တက်လို့မရ…
နိုင်ဂျံဂါးဆိုတာဂျီးမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ကျဒေါ့လည်း ၆၃က မကျ….
ရီရဒယ်. …ဗမာကျောင်း ဆယ်တန်းအောင် (ဂုဏ်ထူးလေးငါးလုံးလောက်ထွက်တဲ့အဆင့်ပေါ့ဗျာ)
ကို ၃လ-၆လ လောက် အိုင်အီးအယ်လ်တီအက်စ် ထရိန်းရင် ဘန်ဆစ် ပြေးမလွတ်ပါဘူး(ကြိုးဇားရင်ပေါ့)
ဟိုဗုံမဟုတ်ပတ်မဟုတ်လေးဒွေ ကတော့ ၅တောင်အနိုင်နိုင် ဖြစ်တာ တွေ့ဖူးရဲ့…
ဂိန် ဂိန်.. .မိဘနားကားဘီ….
အဲ့လိုနဲ့ နိုင်ဂျံဂါး ဆိုဒါကြီးကို ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ရောက်သွားတော့ …
(ပလိုက်ဘိတ် ကျောင်းဘဲဗျ ..ဖွတ်ဂလိဒင်းဂါးလိုချင်လို့ဖွင့်ထားတာ ….)
အဆင့်မမီရင်တောင်မှ အိုရီယန်တေးရွင်း ကိုစ့်တွေဘာတွေဖွင့်စားလိုက်သေး ..အဟေးဟေး…
အဂ္ဂမဟာ နိုင်ဂျံဂါး ဆိုတာဂျီးက ပျက်စီးဖို့ လွယ်ဘာဘိတောင်း …
သည်တော့ ဘိုစာ သင်ဖို့ထက်
ဘိုလိုတွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်အောင် သင်ဖို့ သာ လိုပါကြောင်း….
ဘယ်ကျောင်းထားထား ….ဘေးက ပံ့ပိုး(ပုံသွင်းမဟုတ်ပါ)
ဖေးမပေးနိုင်ရင် လူတော်လူကောင်းလေးဒွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း…
စိတ်ဓါတ်မသင်နိုင်ရင်တော့ ပိုက်ပိုက်တွေ အချိန်တွေ ဦးနှောက်တွေ ..
ကတောက်ခ် …. နှမြောထှာ
အောက်မှာ အီဇာဂါယာ ဘေးမှာ ပါချင်းကိုး ၂အိမ်ကျော်မှာ နိုက်ကလပ်
ဒါးလွယ်ခုတ်မှာ ဇိမ်ခန်း တည်းဟူသောအန္တရယ် အသွယ်သွယ်ကြားမှ
ဟုတ် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာပါတယ်ဗျာ ..
ကျနော် ရေးတာ မရှင်းသလိုဖြစ်သွားလို့ ဆောဒီး ….ပါနော်..
ကျနော်က ကျနော် ကြုံဖူးတဲ့ ချာတိတ်လေးတွေကို ရည်စူးလိုက်တာပါ…
မိဘက စီးပွားရေး ဦးစီး … ကလေး လှည့်မကြည့်နိုင်
ကလေးက ပျက်စီး …
အလွန်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို …အောင်ရုံလုပ်ကြ….
စာမလိုက်နိုင် ဂိုက်ခေါ် ဆြာခေါ်သင် ရင်တာဝန်ကျေပီ မှတ်ကြတာကလား..
ရှက်တယ်ဗျာ ….ကလေးကိုယ်စား မိဘကိုယ်စား ပိုက်ဆံညာယူသလိုဖြစ်နေတဲ့
ဆြာလုပ်စားတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကိုယ်စား ……
သည်တော့ ကျနော် မလုပ်တော့ဘူးပေါ့ …
၀ါးလုံးနဲ့ သိမ်းကျုပ်ရိုက်တဲ့အလုပ်ကို ကျနော် မလုပ်တတ်ပါကြောင်း
အစ်မ အထင်လွဲသွားရင် တောင်းပန်ပါကြောင်း …
မောင်ဂီက စာမသင်ရုံပါ။ အစ်မက အလုပ်ပါထွက်လိုက်တာပါ။ စိတ်ကုန်လွန်းလို့။ ဒါပေမဲ့ဒါကလဲ လူနဲစုပါ။ အဲဒီလူနဲစုဒဏ်တော့တော်တော်ခံရပါတယ်။ အများထဲမှာ ၂ ယောက်လောက်ပါရင်ကို ပဲကျောင်းသွားတိုင်းဘုရားစာရွတ်သွားနေရတာပါ။ ဒီနေ့ဘာကွန်ပလိန်းများကြားရမလဲပေါ့။ စိတ်ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ငါးခုံးမတကောင်ကြောင့်တလှေလုံးတော့မပုတ်စေချင်ပါဘူး။ မြန် မာကျောင်းနဲ့ဘိုကျောင်းတွေရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုအချိန်ရရင်တော့ပိုစ့်တခုအနေနဲ့တင်ချင်ပါသေးတယ်။ ၂ ခုလုံးမှာကောင်းတာတွေရှိသလို မကောင်းတာတွေလဲရှိပါ တယ်။ နောက်ပြီးမိဘတွေရဲ့တွေးခေါ်မှု့နဲ့ရွေးချယ်မှု့တွေပေါ့။
မိုးစက်လည်း သိသလောက်ဝင်ရွှီး အဲ အားဖြည့်ပေးပါ့မယ်
ရပ်ရွာ အတွင်းရှိ အမျိုးကောင်းသားတို့ အမျိုးကောင်းသမီးတို့
ကိုယ်ဟာကိုယ် ကြိုက်လို့ စားရင်လည်း ပလတ်စတစ်အိပ် တို့ ရေသန့်ဘူးတို့ ဆောင်ထားကြဗျာ
တဂဒယ်ဗျာ စည်းမရှိကမ်းမရှိ ထွေးထားလိုက်တာ နီနေတာပဲ
အော့ကြောလန်နန့်နန့်ထိုး ခွေးလယားသီး ဗြားကြီး ခင်များ…..အဲဒါကွမ်းတံထွေးမဟုတ်ဘူး။အဓိပ္ပာယ်မဲ့လေလေ
အနှုတ်များများလေဘဲ။အကောင်းမြင်ရအောင် ဘယ်တုန်းကမှအကောင်းမပြောတဲ့ လူအတွက်မှတ်ချက်ပေါ့ဗျာ။
ကျနော်တို့ ရွာက ဆရာမ ဒေါ်သဲနုငယ်တစ်ယောက် လည်ပင်းမှာ သံချေးတက်နေတဲ့ နို့ ဆီခွက်ကြီးဆွဲပြီး ထမိန်မနိုင်ဘာမနိုင်နဲ့ရွာထဲမှာ ပတ်ပြေးနေပြီဆိုတော့ ဗိန်န္ဒောဆရာ ဘုန်းကျော်ကတော့ ကုပေးရအုံးမှာပေါ့….အဟတ်….အဟတ်….။ဆေးက နဲနဲတော့ ခါးတယ်နော်။ ရောဂါမပျောက်လည်း လူတော့ အနဲဆုံးပျောက်တယ်။
ဒီမယ် ပုဂ္ဂိုလ် ကိုဘုန်းကျော် မြဲမြဲမှတ်ပါ၊နာအောင် နားထောင်ပါ။အသင် ဖင်ယား၍ဖင်ခံချင်နေလျှင်
ကျွန်ုပ်အသင့်ဖြစ်ပါကြောင်း။နင့် ဖင်ခေါင်းကျယ်ကျယ် ငါမချချင်လဲ၊ငါချပေးမှ နင်ကျေနပ်မယ်ဆို
ဖေးမပေးနိုင်ရင် လူတော်လူကောင်းလေးဒွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း…ဟုမိဂီဂီမှ ပြောပါသည်။
များ ထောက်ခံပါသည်..များ ရဲ့သားသမီးများ ဘိုကျောင်းမထားနိုင်သော်လည်း….ဘိုလိုတွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်အောင်ကြိုးစားပီးပံ့ပိုးပေးလျှက်
ကဖုန်းကျော်နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကျုပ်အထင်ပြောရရင် မဟာဗန်ဓုလငယ်စဉ်..မောင်ရစ်လုပ်သလိုလုပ်နေတာ
ဟုထင်ပါသည်…ခုဆိုကွန်မန့်တွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ သူ့ကိုမသိသူမရှိတော့ပါဂျောင်း…
ကျွန်တော်လည်း ဘို လို တွေးခေါ်ပြီး The most popular person အနေနဲ့ ကိုဘုန်းကျော်ကို vote လုပ်ရမယ်ထင်တယ် .. :grin: :grin: (အကောင်းဆုံး နဲ့ အဆိုးဆုံး ရှိခဲ့ရင်ပေါ့)
တစ်ခါမှ အနီ ၁၇ မတွေ့ ဘူး လားလို့ :grin:
(ခင်ဗျားတို့က ကိုဖုန်းကျော် ရေးတဲ့ အကြောင်း အရာတိုင်းကို Negative View တွေနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်နေတာကတော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်)လို့ခ ပြောထားပါတယ်။
(မယောင်ရဆီလူ ကိုယ့် -ီး ကိုယ်မြွေမှတ်လို့ ထခုန်သလိုပဲ။)လို့ ကိုဖုန်းကျော်ကရေးထားတာမျိုး
ကိုတွေ့ရပြန်တော့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ကလူတွေ နောက်ရွာထဲကစာဖတ်သူတွေ အားလုံးက
အဲလိုနိုင်းပြီး ပြောရလောက်အောင် တော့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီပိုစ်ထဲရေးတာကို ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူး က ကိုယ့်အပိုင်းနဲ့ကိုယ်ပါ။
ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ရေး ကိုယ်ယုံကြည်တာ ကိုယ်တင်ပြ၊
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အယူအဆတစ်ခုကို တင်ပြတဲ့အခါ ယဉ်ကျေးဘို့တော့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီလူကပို့စ်တင်လိုက်ရင် သူများနားမလည်အောင်တမင်ပြောပြီး ပွဲဆူအောင်လုပ်တာလား သူကိုက မြန်မာလိုလိပ်ပတ်လည်အောင် မတတ်တာလား တခုခုဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆဲတာတော့ ကောင်းကောင်းတတ်သား။
အင်းဆဲ တဲ့လူကဆဲ၊ဆူတဲ့သူကဆူ စိတ်တော့ကုန်နေပီ။အကုသိုလ်တွေတိုးတယ်ဗျာ။
ကိုယ်ပေးတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျအတွက် မျှမျှတတလေးဆို အားလုံးသူအတွက် အဆင်ပြေမှာ
ဒီလူနှယ့် ရေးလိုက်တဲ့ ပို့ စ်တိုင်းမှာ ရွာဆူအောင်လုပ်နေလေတော့ အကိုတို့ ၊အမတို့ 
ရာဝင်ပြီး မန့် မနေကြပါနဲ့ တော့ဗျာ။ပစ်ထားလိုက်ပါတော့ လို့ တောင်းဆိုပါတယ်။